dimanche, 26 juin 2022 10:55
Miarahaba antsika Malagasy rehetra amin'izao dingana ho any amin'ny tena fahaleovan-tena izao.Maro tokoa ny ezaka mbola ataotsika vao tena afaka milaza fa mahaleo tena isika. - Mila mahaleo tena ara-tsakafo, indrindra ara-bary foto-tsakafotsika isika,- Mila adika ary ampiasaintsika amin'ny Lalàna sy ny didy ,rehetra eto amintsika ny teny Malagasy,- Apetraka ho ny teny Malagasy irery ihany no teny ofisialy ao anaty Lalampanorenantsika, ny teny hafa dia fitaovam-pifandraisana fotsiny ihany amin'izay ilana azy,- Teny Malagasy no anondroana ny birao sy ny asam-panjakana ary ny taratasy rehetra, eny anivon'ny Ministera, ka hatrany amin'ny biraom-pokontany,
samedi, 25 juin 2022 18:04
Fambolena : Manan-danja lehibe ny fampiasana zezika bio vita Malagasy
Madagasikara dia manana tany midadasika tokoa. Amin'ny velarana 587 000km², ny 5% ihany no misy fambolena, ny 15% no toeram-ponenana. Ny 80% n'ny tanitsika izany dia tsy miasa. Nefa voalaza fa 80% n'ny Malagasy dia tantsaha, na mpamboly sy mpiompy na mpanjono. Eo ankatoky ny fankalazana ny filazana hoe Fahaleovan-tena, dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahaleo tena amin'inona isika Malagasy. - Mahaleo tena ara-tsakafo ve ?- Mahaleo tena amin'ny PPN ve ?- Mahaleo tena ara-bola ve ?- Mahaleo tena amin'ny angovo sy herinaratra ary ny rano ve ?- Mahaleo tena ara-politika sy sosialy ve ?- Mahaleo tena ara-tafika ve ?
Tsy miafina izy fa isika no te hanapi-maso. Ny antsoina hoe Banky, dia Orinasa mpitady vola amin'ny alalan'ny fampiasam-bola sy fampindramam-bola. Tsy mpanao asa soa izy izany, tsy mpamatsy vola fa mpampindram-bola misy zana-bola sy anto-bola. Ka raha miteny izy hoe, tsy averina ny atsasaky ny vola nampindraminy, na avadika hoe, ny atsasany atao trosa, ny atsasany fanomezana, dia fomba fiteny fahita ara-barotra izany.
vendredi, 17 juin 2022 08:01
Toe-karena : Tsy milamina ny sehatry ny lavanila
Miazakazaka ny toe-draharaha ankehitriny, ary mihenjan-droa ny tady. Etsy an-kilany, ireo tantsaha mpamboly lavanila Malagasy, miaraka amin'ireo mpanangom-bokatra na préparateurs collecteurs ary ireo Mpanondrana lavanila ela nihetezana amin'ity sehatr'asa ity, manoloana ireo Vahiny miaraka amin'ny Malagasy vitsivitsy mampiasa ny herin'ny vola sy fahefam-panjakana, satria akaiky mpitondra, ka te hibodo irery ny fihariana lavanila. Araky ny lalàna velona dia malalaka ny tsena sy ny fihariana lavanila, ny tolotra sy ny tinady no mamaritra ny vidin-davanila. Mahazo miantsehatra avokoa ny rehetra rehefa mahafeno ny fepetra mahakasika ny asa lavanila.
jeudi, 16 juin 2022 12:37
Pilo kely atoandro : Tsinjaka vody sa sekoly iray ?
Niantsoana mpanankanto sesehena sy anaovana fety makotroka ny fanombohana asa sy fitokanana zava-bita any atsimo. Tsy misy filazana mihitsy moa ny fandaniana amin'ireny zavatra ireny, ka dia anao tombana arak'izay hita-maso isika : Frais delegasionina présidence- Présidence : Avion - 4x4 - Protocole - Garde corps - Sécurisation - Hébergement : 100 000 000ar- Equipe présidence 10 (minimum) :
Tsy misy andro iray tatoato tsy ahenoana ny mety fiakaran'ny vidi-tsolika, vokatry ny zava-misy maneran-tany, sy ny zava-misy eto an-toerana. Ny Filoham-pirenena aza dia efa nampilaza ny mety ho fiakaran'izany vidi-tsolika izany, raha nikabary nampiakatra ny karama farany ambany ho 250 000ar izy. Raha ny nambaran'ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoran'afo, Andry RAMAROSON, tanatin'ny fandaharana fahitalavitra rahavavy, dia misy fanadiovana atao, satria maro ireo fandaniana tsy eken'ny fanjakana ny andoa azy, noho ny antony tsy mazava ny nalehan'ireo solika ami-tapitrisany litatra, sy fakitira tsy tokony alohan'ny fanjakana. Maro ihany koa ireo hetra sy haba mbola tsy naloan'ireo mpaninjara solika ho an'ny fanjakana hoy ihany ny minisitra Andry RAMAROSON.
mardi, 14 juin 2022 08:40
Fikaonan-dohampirenena mikasika ny fananan-tany : Ireo fehin-kevitra sy vahaolana
Nifarana ny tolakandro zoma 10 jona 2022 teo ny Fikaonan-dohampirenena mikasika ny fananan-tany, izay natao teny amin’ny CCI Ivato, rehefa naharitra telo andro ny 08, 09 ary ny 10 Jona 2022. Maherin’ny 700 ny mpandray anjara, ary lohahevitra 5 no noresahina tamin’zany, dia :- Ny « Fahazoana sy fisitrahana tany ho an’ny Malagasy », - Ny « Tany sy ny Fampandrosoana », - Ny « Famahana ny ady tany », - Ny « Fitantanana ny tany amin’ireo mpisehatra rehetra »,- Ary ny « Fangaraharahana ny antontan-kevitra mahakasika ny fananan-tany ».
samedi, 11 juin 2022 22:44
Fandaharana RTA Ca me dit
Mankasitraka ny Télé sy Radio Rta nanasa tamin'ny fandaharana "Ca me dit"Misaotra ny minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Andry Ramaroson.Misaotra ny filohan'ny Vondron'Olona Miaro ny Zon'ny Mpanjifa eto Madagasikara (V.O.M.Z.M.M) Rasolofosaonina Ratsimbazafy Eugène.Misaotra ny mpanao gazety sady tale famoahana Radio Télévision Analamanga RTA, Heritiana Ny Anjarason, ary ireo teknisianina maro, nanatontoso ny fandaharana androany sabotsy 11 jona 2022. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana. Tafandria mandry.Patrick Hitanao amin'ity roy ity ny fandaharana ho an'izay tsy mbola nahita, na ireo te hamerina hijery. https://www.facebook.com/officiel.rta/videos/551906239725280/ (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 10 juin 2022 22:04
Ady hevitra TVM - NDREMANJARY Jean André - Patrick Raharimanana
Mankasitraka ny TVM nanasa tamin'ny fandaharana Ady Hevitra.Misaotra ny RNM nampita miaraka izany ihany koa. Misaotra ny Loholon'i Madagasikara NDREMANJARY Jean André niaraka niady hevitra.Misaotra ny namana mpanao gazety, Mamy Razanakoto, ary ireo teknisianina maro nandrindra sy nanentana ary nanatontosa ny Ady hevitra. Patrick Rohy azo hijerena ny fandaharana : https://www.facebook.com/televizionamalagasy/videos/390029853143986/
(Somary lava sy teknika kely, vakiana tsikelikely, dia hiverenana raha tsy azo tsara) Ny trondro dia mila ôksizenina, toy ny olombelona sy ny biby maro.Ny azy tsy mifoka rivotra ety ivelany, fa ny ôksizenina ao anaty rano no miditra amin'ny sagoaga (esasa na koa trioka, branchie, ilay menamena akaiky ny tendany iny, misokatra sy mihidy mampiditra rano), izay taovam-pisefoana hita amin'ny biby miaina an-drano. Izy io dia ahafahan'ireo biby ireo maka ny ôksizenina amin'ny rano amoahana diôksida karbônika. Ny tainy sy ny fahalovan'ireo sakafo tsy laniny anefa dia miteraka nitrite, izay singa mandoto ny rano, ka maha kely ny ôksizenina. Ilaina ny fanoloana matetika ny rano, na ampiana motera ampiodina ny rano anavaozana ny ôksizenina. Raha maro anefa ny trondro, na kely ny toerana asiana azy, dia mila ampiana filtre ny dobo.